» विदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर: कुन देशको कति? हेर्नुहोस् (सूचीसहित)
विदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर: कुन देशको कति? हेर्नुहोस् (सूचीसहित)
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार ११:११ प्रकाशित
चितवन – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरेको छ ।
यस्तो छ अन्य देशको विनिमयदर